လေးဖက်နာ နှင့် ဆေးကောင်းတလက် | MTS Online Radio
လေးဘက်နာဟာ လူရွယ်တွေ သိချင်ကြတဲ့၊ သိသင့်တဲ့ ရောဂါတခုပါ။ ဆေးစာမှာတော့ အနီးစပ်ဆုံးက Rheumatism ဖြစ်ပါတယ်။ Rhumatic အဆစ်နာ၊ Rhumatic အဖျား၊ Rhumatic နှလုံးရောဂါ၊ စတာတွေကို ခြုံခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက နဲနဲတော့ ခေတ်နောက်ကျသွားပါပြီ။ ရောကော သောကော လုပ်ရာကျနေလို့ပါ။ ဒီအုပ်စုဝင် Arthritis ရောဂါကို ကုရတာနဲ့ Lupus ကို ကုရတာ ဘာမှမဆိုင်အောင် မတူလို့ ရောဂါအုပ်စု တခုထဲ လုပ်ဘို့ မဆီလျှော်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခဏခဏအဆစ်နာရင် အလုပ်အကိုင်ပါပျက်မယ်။ ကြာလာရင် အထူးသဖြင့် လက်ဆစ်တွေက ပုံသဏ္ဌာန် ပြောင်းသွားလို့ ကြည့်မကောင်း ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အမျိုးအဆွေထဲမှာ လူနာရှိရင် “စိတ်တော့ မပျက်ပါနဲ့” လို့ အရင်ပြောထားပါရစေ။ ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံရရင် Rheumatoid arthritis ဖြစ်ရင် လုံးဝ ပျောက်သွားစေရမယ်လို့ ဆရာဝန်များက အာမမခံပါ။ ဆေးကုတာရဲ့ ရည်မှန်းချက်က နာနေတာတွေ သက်သာအောင်၊ အထိခိုက်နည်းအောင်၊ ဒုက္ခိတ ဖြစ်မသွားအောင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ပရုတ် ……. ၁ကျပ်သား
(၃) လေးညှင်း ….. ၁ကျပ်သား
(၄) ဇာတိပ္ဖိုလ်သီးမှုန့် ၃ကျပ်သား
(၆) နနွင်း သတ္တုရည် ၅ကျပ်သား
(၇) ဂမုန်းတိမ်ပြာ သတ္တုရည် ၅ကျပ်သား
(၈) မိဿလင် သတ္တုရည် ၅ကျပ်သား
(၉) တောအရက် ၁ပုလင်း
ဤဆေး(၉)မျိုး၊ ဆေးချိန် (၂၆)ကျပ်သား နှင့် တောအရက်(၁)ပုလင်း တို့ကို သမအောင် ရောစပ်ပြီး
လေလုံပုလင်းနှင့် ထားပါ။ လေးဖက်နာရောဂါ အဆစ်ရောင်၊ အဆစ်ကိုက် ရောဂါရှင်များ နံနက်၊ည တစ်နေ့(၂)
ကြိမ် ပုလင်းကို လှုပ်ပြီး လိမ်းပါ။ သက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
(၃)ပန်းနု ….. ၈ပဲ
(၄) ပန်းမ …. ၈ပဲ
(၅) ဖာလာ .. ၈ပဲ
(၆) ကတ္တရသင်္ချေ … ၈ပဲ
(၇) စေးမခန်း …. ၈ပဲ
(၈) ရိုးတံ …… ၈ပဲ
(၉) ဆေးပုစွန်တုပ် ….. ၈ပဲ
(၁၀) ချောင်းကြား … ၈ပဲ
(၁၁) နံ့သာဖြူ …..၅ကျပ်သား
(၁၂) နံ့သာနီ ….. ၅ကျပ်သား
(၁၃) သကြားခဲ …. ၅ကျပ်သား
(၁၄) စန္ဒကူးနီ …. ၅ကျပ်သား
(၁၅) ကံ့ကော်ဝတ်ဆံ ….. ၅ကျပ်သား
အထက်ပါဆေးများကို အမှုန့်ပြုလုပ်ပြီး သမအောင် စုပေါင်း ရောစပ်ပါ။ လေလုံပုလင်းနဲ့ ထားပါ။
တစ်နေ့ (၃)ကြိမ်သောက်ပါ။ နံနက်၊နေ့လယ်၊ညနေ ရေနွေး(သို့) ကွမ်းရွက်ပြုတ်ရည်နဲ့ သောက်ပါ။
တစ်ခါသောက်လျှင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်း သောက်ပါ။
Forward Mail များထဲမှ အသုံးဝင်မယ့်ဆေးစွမ်းတလက်ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒရှိပြီးတိုက်ဆိုင်သူများ အကျိူးရှိပါစေ။
ကျန်းမာသုခ ရရှိပြီး ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုများကို အကျိူးရှိစွာဖြင့်အချိန်ကုန်လွန်နိုင်ကြပါစေ။
3 comments on “လေးဖက်နာ နှင့် ဆေးကောင်းတလက်”
zaw myo htun viber0933103184
December 15, 2013 @ 2:15 am
December 1, 2013 @ 6:17 pm
မည်လေးဖက်နာရောဂါကိုတိတိကျကျပျေက်ကင်းအောင် ကုသနှိင်သည်မြန်မာပြည်က ဆေးကိုကမ္ဘာ့ကသိအောင်ပြသခွင့်ရချင်တယ်
ကုသနိုင် ဖုထ ကောက်ကွေးသွေးလေးဖက်နာကို
ဂါအမြစ်ပျက်ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနှိင် သည်